Ciidamada Dowladda oo maanta qoriga Waaqlaha loo yaqaano ka helay guri ku yaala Degmada Yaaqshiid - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciidamada Dowladda Somaliya, ayaa waxay maanta Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ay ka helayn qoriga Waaqlaha (75mm), ka gadaal markii loogu soo sheegay in lagu haayo guri ku yaala Degmadaasi.
Ciidamada Dowladda, ayaa galabta gaaray gurigaasi oo ku yaala inta u dhaxeyso xaafada Caymiska iyo Warshadda Coca Cola ee Degmada Yaaqshiid, waxaana u suurta gashay in ay ka soo saaraan meel god ah oo lagu qariyay.
Hay’adda Nabad Suggida Qaranka, ayaa isla galabta qorigaasi ku soo bandhigtay Magaalada Muqdisho, waxayna ku sheegtay mid uun qayb ka ah hubka lagu dhibaateeyo shacabka Somaliyeed.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan, oo goobtaasi kula hadlay Warbaahinta, ayaa wuxuu sheegay in tallaabada qoriga lagu soo qabtay, ay ka dambeysay markii ay ku soo wargeliyeen shacabka, sida uu yiri.
Afhayeenka, ayaa wuxuu dadka reer Muqdisho ku booriyay in ay xoojiyaan wada shaqaynta ay la lee yihiin laamaha ammaanka, si looga hortaggo khatarta ay nabadiidka ku yihiin xasiloonida, sida uu yiri.
Maxamed Yuusuf wuxuu balanqaaday in ay abaalmarin wanaagsan siin doonaan cid kasta oo ku soo wargelisa, goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan Al Shabaab iyo meelaha ay hubkoodu ku qarinayaan.
Wariye soomaaliyeed oo ka soo waramaya goob ay ka quusteen wariyaasha Aduunka Daawo muuqaalka